Kulan-waynaha Todobaadka Qurbajoogta DDSI 7da Jully ilaa 14ka Jully - Cakaara News
Kulan-waynaha Todobaadka Qurbajoogta DDSI 7da Jully ilaa 14ka Jully
Adhisababa( Cakaaranews ) Isniin, 18ka April 2016. Xukuumada DDSI ayaa waxay qaban doontaa kulanwaynaha todobaadka qurbajoogta DDSI. Kaasoo kadhici doona xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga gaar ahaan hoolka madaxtooyada ee loogu magac-daray KAALI laga bilaabo 7da jully ilaa 14ka jully ee sanadka 2016 GC.
Hadaba ujeedada kulan-waynaha ayaa noqonaysa sidii loo xoojin lahaa kaqaybqaadashada horumarka iyo maal-gashiga wadankooda iyo sidii loo qiimayn lahaa waxqabadka xafiisyada, gudiyada jaaliyadaha, madaxda xisbiga iyo ururka horumarinta soomaalida itoobiya loona sii xoojin lahaa shaqooyinka jaaliyadaha dibada islamarkaana looga abaal-marin lahaa natiijooyinka aad muhiimka u ah ee ay qabteen jaaliyaadka dibada ee DDSI iyo waliba sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqanka soo jireenka ah ee shacabka DDSI.
Waxaan iyana meesha kamadhnayn sidii looga wada hadli lahaa tir-tirida iyo fashilinta fikirada iyo dhaq-dhaqaaqa argagixisada caalamiga ah sida al-qushaash, ubo iyo kuwo lamid ah.
Si kastaba ha ahaatee, kulan-waynaha ayaa waxaa kamid ah waxyaabaha lagaga hadli lahaa ujeedooyinka kor kuxusan iyo kuwo kale oo muhiim u ah horumarka, nabadgelyada maamulka iyo cadaalada DDSI iyo qurbajoogtaba.
Tirada kasoo qaybgalayaasha shirkan dhanka qurbajoogta ayaa lagu wadaa 2,500 oo qurbajoog ah iyo 500 oo isugu jirta xukuumada dalka, deegaanka iyo kililada kale ee dalku kakooban yahay.
Hadaba si loo qaybiyo 2,500 ee qurbajoogta kasoo qaybgalaysa kulan-waynaha ayaa waxaa lagu salayn doonaa qaab-dhismeedka gobolada iyo degmooyinka ee xisbigu u aqoonsan yahay wadamada dibada tusaale ahaan North America waxaa magaalo madax u ah MN sida uu xisbigu u aqoonsan yahay. Waxaa kale oo lamid ah UK London. Wadamada kale ee Europe waxaa magaalo madax u ah Denmark. Meesha wadamada carabta oo dhan magaala madaxdu gobolku tahay Dubai. Wadanka Australia iyo Newzealand magaala madaxdu waa Melbbourne.
Sida lawada ogsoonyahay ama ay kudhaqmaan dhamaan xisbiyada kataliya wadamadooda sida XDSHSI oo kale waxay taageerayaasha xisbigooda ee dibada kunool ukala qaybiyaan qaab-dhismeed ay kula xisaabtamaan sida gobol, degmo iyo xaafad ama tuulo. Sidaas awgeed, ayuu XDSHSI uu qurbajoogta iyo jaaliyadaha dibada ukala saaray isagoo kusalaynaya tirada xubnayaasha XDSHSI iyo taageerayaashiisaba gobolo iyo degmooyin.
Waxqabadyada ama shaqooyinku ay xukuumadu qabanayso ee kaga aadan qabashada kulan-waynaha waxaa kamid ah: waxay diyaarin goobta shirka iyo dhamaan martigalinta sida jiifka, cuntada iyo gaadiidka ee mudada uu socdo kulan-waynuhu oo ah 7bari iyo 3 cisho oo booqashooyin ah iyo 2 cisho oo ambabax ah isugayn mudo 12 maalmood ah.
Shaqooyinka iyo kaalinta qurbajoogtana waxaa kamid ah: in ay si wadaniyadi kudheehan tahay ugu huraan wakhtigooda iyo maalkoodaba sidii ay uga soo qaybgali lahaayeen todobaadka kulan-waynaha qurbajoogta DDSI si ay shacabkooda kula-wadaagaan aqoon iswaydaarsi. Sidaadarteed, waxaa looga baahan yahay qurbajoogta inay ticketka diyaarada ee ilaa jigjiga ay hada sii goostaan go and back iyo in jaaliyad kasta ay sii diyaarsato wixii ay kaga qaybgali lahayd kulanwaynaha iyo waxqabadkooda kajaaliyad ahaan.
Sidoo kale, waxaa looga baahan yahay mas’uuliyiinta jaaliyada dibada inay diwaangalinta cida shirka kaqaybgalaysa ay diyaariyaan magaca, sawirka iyo wadanka kadibna ay usoo diraan xafiiska qurbajoogta DDSI iyo xarunta dhexe ee xisbiga mudada u dhaxaysa 20ka April ilaa 30ka bisha May. Ugudanbayna waa inay qurbajoogtu jigjiga kusugnaadaan 6da Jully.
Hadaba, hadii aan si kooban usoo dhigno qaab socodka iyo faah-faahinta qaar kamid ah waxyaabaha dhici doona inshaa allah mudada 12ka cisho ah gaar ahaana todobaadka uu socdo kulan-waynuhu:
Habeenimada 6da Jully waxa ay kaqaybgalayaahu heli doonaan kaarka galida kulanwaynaha oo ay kuqoran tahay magaca, sawirka, contact person, numberka mursiga uu fadhiisanayo, wadanka uu kayimid, magaca iyo numberka contact person goobta numberka qolka uu jiifsanayo iyo emergence contact number in Ddsi.
1da ilaa 6da Jully waxaa qurbajoogta soo dhawayni mas’uuliyiinta sare ee Ddsi.
7da Jullyna waxaa wacdaro dhigi doona kooxda baanbayda oo si heer sare ah u muujin doona soo dhawaynta sare ee qurbajoogta. 2da ilaa 3da subaxnimo kadibna, waxaa kulanwaynaha lagu furi doonaa heesta calanka federalka iyo heesta calanka DDSI.
Kadibna, shirkii ayaa furmi. Waxaana lagu hogaamin doonaa oo kaliya jadwalka loogu talagalay. Kaas oo ay ansixiyeen xafiiska qurbajoogta DDSI iyo madaxda jaaliyadaha xafiiska maamulka iyo xarunta dhexe. Sidaadarteed, cid kasta waa inay kuxisaabtanto inaan jadwalkaas si laab-lakac ah waxna loogu daraynin ama looga saaraynin.
Waxaana kamid ah jadwalka kulanwaynaha todobaadka qurbajoogta:
ü Xukuumada DDSI ayaa soo bandhigi doonta warbixinteeda horumarka iyo kulamadii ay layeelatay qurbajoogta kadibna waa laga doodi
ü Madaxda jaaliyada ayaa soo bandhigi warbixinta jaaliyadooda
ü Qurbajoogta ayaa soo bandhigi doona khibradahooda horumarineed
Sidoo kale, waxaa jiri doona tartan dhaqameed lagu tartami doono su’aalo dhaqameed iyo hal-xidhaale dhaqameed ay soo diyaariyeen dad aad ugu xeel-dheer dhaqanka. Tartankan ayaa wuxuu yeelan doonaa abaal-marin aad u wayn sida shahaado sharaf heer sare ah, lacag sida cida qurbajoogta ah ee kuguulaysata tartanka dhaqanka waxaa shahaado sharafta udheer ticket go and back ah oo loo celiyo, dhul uu dhisto oo meesha uu karabo DDSI laga siiyo.
ü Waxaa kale oo jiri doonta tartanka kubada cagta ee qurbajoogta iyo DDSI.
ü Waxaa kadibna dhici doona tartanka Lisida Geela oo dhex mari doona jaaliyadaha
ü Tartanka Shaxda oo isna dhexmari doona qurbajoogta jaaliyadaha
Kadibna dhamaan tartamada dhaqanku waxay dhexmari doonaan qurbajoogta iyadoo halkaas lagu abaal-marin doono cidda guusha hanata.
FG: qofka cel-celis ahaan ugu badiya qurbajoogta wuxuu heli doonaa abaal-marin gaar ah.
Waxaa kadib xigi doona tartanka Cunto karinta oo dhex mari doona hogaaminta jaaliyada iyo mas’uuliyiinta DDSI. Da’da tartanka cunto karinta kaqaybgali doonta waa inta udhaxaysa 25 ilaa 50 jir. Waana raga oo kali ah. Tartankan cunto karinta dhanka xukuumada waxaa uga qaybgali doona mw-kuxigeenka mudane Cabdixakiin, wasiirka maaliyada mudane Axmed, wasiirka ganacsiga mudane Khadar, wasiirka arimaha bulshada, madaxa hanta-dhawrka, Cabdirisaaq saxane, Suldaan khayre, Cbdinuur Colow, Guuleed Aw-cali iyo Gudoomiyaha maxkamada guud. Dhanka qurbajoogtana waxaa soo xuli doona xafiiska qurbajoogta iyo maamulada jaaliyaadka.
FG: Nooca cunto karinta lagu tartami doono waxay noqonaysaa mid sir ah oo kaliyah maalinta tartanka ah. Wax kasta oo cuntadaas lagu sameeyo waxaa lasoo hordhigi doona tartamayaasha. Waxayna karinta cuntada ay tartamayaashu bilow ilaa dhamaad ay kuhorkarin doonaan hoolka shirka ama dadka hortiisa. Waxaana jiri doona gudiga tartanka cunto karinta oo kakooban dhanka xukuumada iyo qurbajoogtaba iyo xirfadlayaal aad ugu takhasusay dhanka cunto karinta.
Waxaa iyana tartamada kaladuwan kamid noqon doonta tartan loogu magac daray tartanka halgan-faneedka oo dhex-mari doona jaaliyadaha. Waxaana lagu tartami doonaa heesaha halgan faneedka ee ay koox ama fanaaniintu sameeyeen-kooxaha fanka iyo fanaaniinta ee qurbajoogta.
FG: laguma tartami karo heeso ama halgan faneed maanta wixii kadanbeeya lasameeyay. Kaliya kaalinta ay jaaliyadu kaga qaybqaadatay halgan faneedka dhanka abaabulka iyo wacyigalinta shacabka Ddsi iyo qurbajoogta ee ay jaaliyaduhu horay usameeyeen.
Sidoo kale, waxaa jiri doona tartanka halgan faneedka oo dhex-mari doona 4 kooxood ee DDSI.
Waxaa lamid ah oo dhici doona: tartanka hibada iyo hal abuurka(talent show), tartanka dhaantada ee jaaliyadaha dibada, tartanka kubada cagta, orodka, xadhig-jiidka oo dhexmari doona jaaliyadaha dhexdooda, iyo jaaliyada iyo ddsi.
Waxaa kamid noqon doona waxyaabaha laqaban doono: dhamaan qurbajoogta DDSI waxay fulin doonaan qorshaha cagaarinta deegaanka. Waxayna beeri doonaan geedo. Qof kasta oo qurbajoog ahi wuxuu beeri doonaa ugu yaraan laba geed.
By Xafiiska qurbajoogta DDSI